Khabiirka Cimiladu wuxuu qeexayaa caalamka ugu sarreeya 10ka sannadka 2017 Si aad u sugto amaan
Malaayiin qof oo internetka ah ayaa ka walwalaya maalin walba. Qofka si fiican u yaqaan, email kasta oo cusub ee sanduuqa ku jira waa la soo taxadaraa. Tirakoobka ayaa muujinaya in spam uu ku faafo email ahaan. Bishii Nofeembar 2016, farriimaha spam ayaa lagu qiyaasey 61.66 boqolkiiba tarjumada emailka adduunka oo dhan - how to use aspire k2. Tani waxay ka dhigan tahay ilaa 82 bilyan e-mail spam ayaa ku wareegayay adduun maalin kasta. Waxay kaa yaabin kartaa in qiyaastii boqolkiiba 80 ee spamka ay soo saaraan koox yar oo ka mid ah burcadbadeedka adag.
Frank Abagnale, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semmat , wuxuu sharaxayaa 10ka sirood ee ugu sarreeya caalamka sannadka 2017 si aad u sugto nabadgelyo.
1. Farmashiga Qaranka
Canadian Pharmacy waxaa laga yaabaa inuu yahay koronto-dhaliyaha ugu caansan aduunka. Waxaa la rumeysan yahay in uu ku saleysan yahay Ukraine / Ruushka, wuxuuna isticmaalaa farsamooyinka botnet kala duwan iyo shabakadda Shiinaha martigelinta shabakadaha faafinta iyo faafitaanka 'spam spam'. Malaayiin Spam waxay u dirtaa maalin kasta, Pharmacy Canadian Pharmacy waxay u badantahay inay noqoto meesha ugu fiican ee xanuunka iyo daawooyinka labka ah ee labka ah
2. Michael Boehm iyo Associates
Tani waa urur wakhti dheer ah oo ka shaqeynaya spam oo ka shaqeeya magacyo kala duwan oo kala duwan. Waxay isticmaashaa noocyo kala duwan oo raqiis ah oo aan badneyn, oo ku yaala VPS oo marti gelinaya IP-yada si ay u maamushaan tirooyinka gawaarida ee spam.
Spammer Sparker Kobcin Kumbiyuhu wuxuu ku saleysan yahay Florida waxana la aaminsan yahay in uu yahay jinsi-dambiile ah Darrin Wohl, oo ah spammer caan ah ROKSO. Sanadkii 2014, Yair Shalev ayaa amar ku bixiyay inuu bixiyo $ 350,000 oo ganaax ah Guddiga Ganacsiga ee Federaalka (FTC) oo ku xiran isaga oo ku xirey inuu diro emaillada macaamiisha inta lagu gudajirayo baaritaanka Obamacare. In emails, wuxuu uga digay dadka qaata in haddii aysan ku dhajin lahaa xidhiidhka la siiyay isla markiiba si ay u iibsadaan qorshe caymis, waxay jabinayaan sharciga
4. Dante Jimenez oo ka tirsan Aiming Invest
Spammerkan wuxuu la shaqeynayaa qaar ka mid ah spammers ee ugu xun. Isagoo kaashanaya asxaabtiisa, Dante waxay u adeegsadeen server-yada khatarta ah iyo kuwa marti-galiyaha ah ee Bariga Yurub inay sameeyaan is-xajinta khadka dheeraadka ah
5. Alvin Slocombe (Adeegyada Internetka ee Cyber ​​World)
Shirkadaha iMedia waa Lindsay oo martigeliyay marti gelinta hawlaha. Waxay u adeegtaa xeeldheer la'aanta martigelinta ROKSO-cybercriminals caan ah. Dadka macaamiisha ah ee Lindsay iyo iMedia Networks waxay isticmaalaan xajmiga botnetka kadibna martigelinta spam waxay ku bixinayaan badda. Spammer iyo kooxdiisi waxay xadidaan cinwaanka IP-yada meelo badan oo shirkado ah muddo dheer iyo isticmaalaan meeshan si ay u noqdaan spam.
Ruushka cybercriminal waxaa loo yaqaanaa inuu ka mid yahay spammers ugu shaqeeya. Xirfadiisu waa qoraal iyo iibinta spamware iyo albnetka. Waxa kale oo uu tuhunsan yahay in uu ku lug lahaa abuurista iyo sii deynta tufaaxa iyo fayraska. Qaar badan ayaa leh ururo badan oo leh khadadka botnet ee Maraykanka iyo Bariga Yurub. Wuxuu ahaa lamaane Alan Ralsky, oo ah dambiilaha Mareykanka lagu xukumay.
Iyadoo ku saleysan oo la rumeeysan yahay in ay ka socoto Huntington Beach, USA, RR Media waa hoyga sare ee macaamiisha oo isticmaalaya magacyo kala duwan si ay u qabtaan howlaha isbaarooyinka. Xasaasiyadaha la duubay waxaa ka mid ah diritaanka emails aan la oggolayn oo loogu talagalay dadka aan qaangaarka aheyn iyaga oo khamriga iyo khamaarka ku jira.
Michael ayaa lagu eedeeyay bishii Febraayo sanadkan ka dib markii lagu helay in uu ku lug lahaan jirey fadaraalka feyladda iyadoo loo marayo hawlgalladiisii ​​spamming. Dacwad ooge ayaa sheegay in spamerkan uu adeegsaday spamming (isticmaalka domainka badan iyo IP-yada) si loogu diro malaayiin spam emails ugu yaraan 9 shirkadood.
Ururkan spam ee xun ayaa ka shaqeeya dhammaan noocyada kala duwan ee spamka. Waxay jabineysaa server-yada dadweynaha, waxay qaadataa iyaga oo ka faa'iidaystaan ​​si kor loogu qaado barnaamijyada been abuurka ah iyo daawooyinka iyo xitaa u qaybiyaan ilmo, shaki iyo filimada xayawaanka. Sidoo kale spammer spammer wuxuu sidoo kale sheeganayaa inuu bixiyo "adeegyada maaliyadeed"
Iyada oo spam iyo barbaariyeyaasha isticmaalaya habab badan oo casri ah sida botnets, isticmaal kasta oo internetka ah wuxuu u baahan yahay inuu aad u taxaddaro marka internetka. Way fiicantahay in la kobciyo lana ilaaliyo heerarka shakiinta markaad furayso emayl cusub maxaa yeelay inta badan spam waxaa loo soo diraa email ahaan. Uma baahnid inaad ku dhiciso mid ka mid ah kor ku xusan ama wax kale spammers.